ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ကိုယ်စား ဝိဇ္ဇာ များနှင့် အမေးစကား ~ .
1:03:00 AM ဆောင်းပါး No comments
ကိစ္စများမြောင် ဤလူ့ဘောင်မှာ အကျပ်အတည်းမျိုးစုံ မသေချာ မသေရာမှုမျိုးစုံနဲ့အတူ နေထိုင်ကြရလို့ ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဒါမှမဟုတ်လည်း အပျော်သဘောနဲ့ ယုံကြည်သူတွေကရော၊ မယုံကြည်သူ ကရော ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ ဗေဒင်ဆရာဖြစ်ဖြစ်၊ အကြားအမြင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြွေဗေဒင်ဖြစ်ဖြစ်၊ စာကလေးဗေဒင်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု မေးမြန်းဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခင်ကတော့ ပျဉ်းမနားဦး သန်းမောင်၊ လျှပ်စစ်ဦးအုန်းသွင်၊ ဆရာစန္ဒြတို့လို သူရိယ သိဒ္ဓန္တ၊ ဗြဟ္မာ့သိဒ္ဓန္တ စတဲ့ ဟိန္ဒူကျ မ်းတွေ၊ မြန် မာ့သံဒိဋ္ဌ မကာရန္တကျမ်းတွေကို အခြေခံပြီး ဂြိုဟ်သွားဂြိုဟ်လာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တွက်ချက်နိုင်ကြသလို လက္ခဏာကိုလည်း စနစ်တကျ ဖတ်ရှုနိုင်ကြတဲ့ ဆရာများ ရှိခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ တော်တော် ရှားကုန်ပါပြီ။ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ တတ်သိပညာမနေသာဆိုသလို အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် ကို ဟောပြောနေတဲ့ ဗေဒင် ဆရာ၊ အကြားအမြင်ဆရာ၊ နတ်ကတော်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပါတယ်။ သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် အခြားသူတွေလိုပဲ အခက်အခဲ မျိုးစုံ၊အကျပ်အတည်းမျိုးစုံနဲ့ ဘဝအဖုံဖုံထဲက သူတို့ရဲ့ ပြောသံတွေနဲ့ ဒီနေ့ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်လို့ ရ မရ သူတို့အမြင်ကတော့ ….
(တဲရော့၊ ဗေဒ၊ လက္ခဏာ)
ကျွန်တော် ဒီလောကထဲ စဝင်ဖြစ် တာက ၂ဝဝ၇ က စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆို ရမှာပါ။ ကျွန်တော် ဗေဒင်ဆရာ မဖြစ်ခင်က ကျွန်တော့်အမေက အဘမင်းသိင်္ခ ခြံ မှော်ဘီ မရမ်းတလင်းမှာ တနင်္ဂနွေ အပတ်တိုင်း အဘမေတ္တာနဲ့ ပြုလုပ်ပေး တဲ့ ခင်ပွန်းကြီး ၁ဝ ပါး ယတြာတောင်းပန် ကန်တော့ပွဲကို သွားလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်တော်က ကျောင်းပြီးခါစ။ ဂစ်တာတစ်လက်နဲ့ ယောင်ဝါးဝါး တောမရောက် တောင် မရောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ အဲဒီမှာ အမေက ခင်ပွန်းကြီး ၁ဝ ပါး အဘခြံမှာ သွားကန်တော့ဖို့ တိုက်တွန်း တယ်။ အဲဒီတုန်းက ခင်ပွန်းကြီး ၁ဝ ပါးဆိုတာ တောင် ဘာမှန်းမသိဘူး။ ခင်ပွန်းဆိုတာ လင်၊ ၁ဝ ပါးဆိုတော့ လင် ၁ဝ ယောက် လို့ ထင်ခဲ့တာ။ အဘခြံရောက်မှ မပြစ် မှားထိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၁ဝ ပါးမှန်း သိ တော့တယ်။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် ရယ် စရာပဲ။ ဒါနဲ့ မကြာမကြာ ခြံထဲရောက် ဖြစ်သွား တော့တာပဲ။ တစ်ရက် ကျတော့ ကျွန်တော့်ညီတစ်ဝမ်းကွဲကလစဉ် အဘ ဖွင့်ပေးတဲ့ အခမဲ့ဗေဒင်သင်တန်းတက်ဖို့ အဖော်လာညှိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဗေဒင်သင်တန်း တက်ဖြစ်သွားတယ်။
သင်တန်းပြီး တော့ ဗေဒင်စဟောကြည့်တယ်။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်လည်း တွက်ကြည့်တော့ ဗေ ဒင်နဲ့လည်း အကျိုးပေးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဗေဒင်လောကသား တစ်ယောက် ဖြစ် သွားတော့တာပါပဲ။ အဘ မင်းသိင်္ခကတော့ ပညာရပ် တွေအားလုံးကို မခြင်းမချန် သင်ပေး လိုက်တာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင် ပြေဆုံး အသုံးဖြစ် ဆုံးကတော့ တဲရော့ ရယ်၊ နူမရော်လော်ဂျီရယ်၊ သုံးတန်ပေါ် နိစ်ကတော့ လတ်တလော အများဆုံး အသုံးပြုဖြစ်တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ထူးခြားမှုကို ပြောရရင် တချို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဟောတာမှန်တာ တို့၊ လင်မယားရန်ဖြစ်ပြီး ကွဲမ လို ဖြစ် နေတာတွေ ယတြာနဲ့ ပြန်အဆင်ပြေ သွားတာတို့ စသည်ဖြ င့်ပေါ့။ ဘယ်လို မှန်သွားတယ်လို့ ဘယ်လို ယတြာ ချေလိုက်တာ ဘယ်လိုကောင်းသွားတယ်လို့ ပြောနေရရင် ကိုယ်ရည်သွေး ပြီး ပြောသ လို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို ပြောပြရနေတာထက် စာ ရင် ကျွန်တော့်ဗေဒင် ဟောခန်းကို အမြဲ လာနေကျလူတွေကို မေးကြည့် လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အခု ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာ တော်ဘုရားကြီး တာဝန်ယူပြီး ဓမ္မစေ တီခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ်ယူမယ်လို့ သတင်းကြားထားပြီးသားပါ။ အားလုံးလည်း ကြားပြီးသား ဖြစ်မှာ ပါ။ ဆရာ တော်ဘုရားကြီးက ရှေ့မှာလည်းသာ သနာပြုတဲ့အခါ အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေ။ ဆယ် ယူလို့ရရှိရင်လည်း တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ အားလုံးလည်း သိပါ တယ်။ ငယ်ကတည်းကဓမ္မစေတီခေါင်း လောင်းကြီးဆိုတာကိုကြားဖူးသလောက် အပြင်မှာ အလုံးအထည် နဲ့ မြင်ဖူးချင် ကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မြင်ဖူးချင် တယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။ ပြီးတော့ ဒီိကိစ္စကို အားလုံးက ဇွဲနဲ့ကြိုးစားနေ ကြတာပဲ လေ။ ဒါ့ကြောင့် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ကြီးဆယ်ယူမှုမှာ အောင် မြင်မှုရှိနိုင် မရှိ နိုင်ပြောရမှာထက်စာရင် အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပါ တယ်လို့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် တောင်တွင်းကြီး ဇာတိ ပါ။ စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာ တွန်းဆရာ ဖြစ်ချင်တယ်၊ ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ရန်ကုန်ကို ဆင်းလာ တယ်ပေါ့။ လာဘ် မိုးစွေ ဦးသန့်ချိတ်ပေးလို့ သုဝဏ္ဏက အဘဆီ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဘဆီ ရောက်တော့ စာပေအတွက်လည်း ဗဟု သုတရ၊ ဗေဒင်နဲ့ လည်း နီးစပ်ပြီး ၁၉၉၄ မှာ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲနဲ့ ဒီဗေဒင်ဆရာ ဘဝကိုရောက်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ ကျွန် တော် အဓိက အသုံးပြု ဟောပြောပေး တာကတော့ သက်ရောက်သုံးတန်ပေါ် နိစ်နဲ့ တဲရော့ကိုသုံးပြီး ဟောပေးပါ တယ်။ ဟောလာတဲ့ သက်တမ်းတစ် လျှောက်မှာ ထူးခြားတာ ပြောရရင်တော့ နည်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင်တော့ ဒီနှစ်ထဲ မှာ ငွေစက္ကူ အသစ် ထွက်မယ်။ အပြာရောင်များ မယ်။ ဝိဇ္ဇာလောက၊ ဝိညာဉ်လောက တစ်ခုခုရဲ့ တိုက်တွန်းမှုကြောင့် ပေါ်မှာ ဒါကြောင့်နဂါးရုပ်တို့ ဘာတို့ပါမယ်ဆိုပြီး ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်မှာ နိမိတ်ဖတ်ဟောဖြစ်ခဲ့ တယ်။ မကြာပါဘူး။ ခြောက်လအတွင်း ၁ဝဝဝဝ တန်ထွက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မှတ်မှတ်ရရ လူသိ ရှင်ကြား ကြုံဖူး တာပါပဲ။
ယတြာဆိုတာ စွမ်းပြီးသား။ ပေး တဲ့ဆရာရဲ့ အားလည်း ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ်တိုင်ပဲ။ ယတြာချေစွမ်းတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင် မလုပ်ရင်တော့ ဘာ မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်က အဓိက ကျတယ်လို့ ပြော ရမယ်။ ကျောင်းလည်းမတက်၊စာလည်း မကျက်ရင်တော့ အဲဒီကလေးကို ဘာယ တြာမှ ချေပေးလို့ မရတာေ ကြာင့် ယတြာဆိုတာ ပံ့ပိုးမှုတစ်ခုပါ။ ဒဲ့မဟုတ် ပါ။
ဘာကိုမှ တာဝန်မယူ၊ ဘာကိုမှ အာမ မခံပါ။ လောကကြီးမှာ သူ့ကံနဲ့ သူ ရှိပြီးသား၊ နတ်တွေ၊ ဝိဇ္ဇာတွေ မပြောနဲ့ မြတ်စွာဘုရားတောင် ပြင်လို့ မရပါ။ ဒီယတြာလုပ်ပါ၊ ဒါရှောင်ပါဆို ပြီး ဗေဒင်ဆရာက ပြောတယ်။ ဒါကို လိုက်နာပြီး ကြိုးစားအားထုတ်ရင်တော့ သူကောင်းသွားမယ် အာမခံသလား ဆို ရင်တော့ အာမခံ လုပ်ငန်းတွေတောင် တကယ် အာမခံသလား ဆိုတာ ပြန်မေး ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်တော့ အာမခံ သလားဆိုရင် မခံပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ် ဓာတ်အင်အား၊ ပညာအင် အား၊ စေတ နာအင်အားအပြည့်နဲ့တော့ အလုပ်လုပ် နေပါတယ်။
အပိုင်ပြောဆိုရင်တော့ အဲဒီခေါင်း လောင်းကြီး သေချာပေါက်ကုန်းပေါ်ကို ပြန်ရောက်လာမှာပါ။ ဒီနေ့ မရောက် ရင် မနက်ဖြန်၊ မနက်ဖြန် မရောက်ရင် သန်ဘက်ခါ၊ သန်ဘက်ခါမရောက်ရင် နောင်နှစ်မှရောက် ရင်ရောက်မယ်။ ဘာ လို့လဲဆိုတော့မရောက်ရောက်အောင် ဆယ်မယ့်လူတွေ ပေါ်လာဦးမှာမို့လို့ပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ်လောက် ကနေ စပြီး ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဓိ ဋ္ဌာန်တွေ ဝင်ချင်လာတယ်။ ဝင်လည်း ဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်ရင် သူဘာဖြ စ်တော့မယ် ဆိုပြီး ပြောနိုင်လာတယ်။ အစကဆိုရင် လူတွေက ကိုယ့်ကို ရူးနေတယ်လို့ တောင် အထင်ခံခဲ့ရတာပါ။ အကြား အမြင်ဆိုတာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ကိုယ့်ကို ဘေးနား ကပ်ပြီး တတွတ်တွတ် လာ ပြောနေတာကို ကြားရတာ၊ မြင်ရတာ ကို ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလူကို ကြည့်ပြီး မနောကအလိုလိုသိလာတာကို ဟော တာကို ခေါ်တာပါ။ အဘနဲ့လည်း အမြဲ တမ်းအဆက်အသွယ် ရှိနေတာ မဟုတ် ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သမာဓိမြင့် အောင် အဓိဋ္ဌာန်တွေဝင်ပြီး မြှင့်လိုက်မှ အဘနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်လုိ့ ရတာ ပါ။
အဲဒီအတွက် ကြီးကိုးကြီးတို့၊ ရွှေ ဘုန်းပွင့်တို့ ဗိုလ်တထောင်တို့မှာ အဓိ ဋ္ဌာန်တွေ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ဝင်ခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း လူတွေကို ကြည့်ရင် နင့်အိမ်မှာ ဘာဖြစ် မယ်။ နင့်အမျိုးထဲ မှာ ဘယ်သူဘာဖြစ် မယ် ဆိုတာတွေ ပြောနိုင်လာပါတယ်။
ဒီလောက က အရမ်းဆန်းကြယ် တယ်။ နားလည်အောင် ဘယ်လို ရှင်း ပြရမလဲ။ ဆရာမကို လာမေးတဲ့ သူတွေ ကို ကြည့်ပြီး အဲဒီလူရဲ့ဘဝမှာ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုအချိန်အထိ ဘယ်လို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ မိဘတွေကို ဘယ် လို လုပ်ကျွေးခဲ့တာ။မိဘတွေက ကိုယ့်ကြောင့် ဘယ်လို စိတ်ဆင်းရဲ ခဲ့တာ။ အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရမရ ဆိုတာ တွေပေါ့။
ဗေဒင်၊ ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်တို့ လိုအကွက်ချဟောပြောပြီးဘာအဆောင် ဆောင်၊ ဘာယတြာချေဆို တာတွေ တော့ မရှိပါဘူး။ လူတွေက သူတို့ရဲ့ ဘဝဟောင်းမှာ ကတိတွေပေးခဲ့ကြတာ ရှိတယ်။ သစ္စာတွေ ပြုခဲ့ကြတာရှိတယ်။ အဲဒီသစ္စာတွေ၊ ကတိတွေကိုလူ့ဘဝ ရောက်တော့ မေ့သွားရော။ အဲဒီမှာ ဘဝဟောင်းကလူတွေက ကိုယ့်ကိုပြန် ခေါ်ချင်ရော။ အဲဒါကို ဒီ ဘဝလူဖြစ်နေ တဲ့သူက မသွားချင်ဘူး။ အဲဒီအခါမှာ ဆရာမက နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ကြားကနေပြီး တောင်းပန် တာတို့ ဘာတို့တွေ လုပ်ပေး ရတာ ပေါ့နော်။ အဲဒီသိုက်တွေက ဘယ်လို သစ္စာ၊ ကတိတွေ ရှိပါစေ။ အဘကနေပြီး အပေါ်ကနေ အမိန့် ပေးလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ ရတယ်။ ဆရာမက အဘ ကိုယ်စားလုပ်ပေးတဲ့ သဘောပေါ့။
တစ်ခုမှတော့ အာမခံတာမျိုး မရှိပါဘူး။ လူတွေမှာ သူ့ကံနဲ့သူ ရှိပြီး သားပါ။ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုမှလည်း အာမ မခံပေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်အရာမှ လုပ်ယူလို့ မရပါဘူး။ သူ တို့ကံအတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိ တယ်။ ကိုယ့်ကို လာမေးတဲ့သူတွေကို ဘာ ဖြစ်မယ်။ သတိထား အဲဒီလောက်ပဲ ပြော ပေးနိုင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟာ ငါ့တုန်းကတော့ ဘယ်လိုမှန်သွား တာ။ အဲဒီဆရာမဆီသွား၊ မှန်တယ် စသည် ဖြင့်တော့ အကျိုးကျေးဇူး ပြန်ခံစားရတာပေါ့။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ် ယူရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ခေါင်း လောင်းကြီးက ကုန်းပေါ်ရောက်ချိန် တန်ပြီ၊ အဲဒီခေါင်းလောင်းကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့သူတွေကလည်း ကုသိုလ်လိုချင် ပြီး ကျွတ်ချင်ပြီဆို ရင်တော့ ခေါင်းေ လာင်းကြီးပေါ်လာမှာပါ။
အဲဒီခေါင်းလောင်းကြီးကို ဆယ် တဲ့သူက လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေ ကောင်းဖို့ လုပ်ပေးတာဆို ရင်တော့ သူ တို့က ခွင့်ပြုပေးလိုက်မှာပါပဲ။ ဘယ်သူ လုပ်ရင်ရမယ်၊ မရဘူး။ ဘယ်တော့ ရောက်လာ မယ်ဆိုတာတော့ ပြောခွင့် မရှိပါဘူး။
ဒီဗေဒင် လောကကိုတော့ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစကတော့ဝါသနာအရအပျော် သဘော ဟောပြောရာမှ စတင်ပြီး နောက်ပိုင်း Professional ဗေဒင်ဆရာ အဖြစ် ကူးပြောင်းခဲ့ပါ တယ်။ ဗေဒင်နှင့် ပတ် သက်ပြီး ဗေဒင်စာအုပ်များစွာဖတ်ရှု လေ့လာပြီး ကိုယ့်ထက်တတ်ကျွမ်းသူ များထံမှာ လည်း ယခုချိန်ထိ လေ့လာ ဆည်းပူးသင်ယူနေတုန်းပါ။ ဗေဒင်ကို ပြောမယ်ဆိုရင် ယတြာပါထည့်ပြောမှ ပိုပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ယတြာကောင်း ချင်ရင် အင်းကောင်းနဲ့မြှောက် မင်း လောင်းပင်ပျောက်ေ စပါတယ်။
အခုလည်း ဗေဒင် ဟောနေပြီး တစ်နေ့နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက်လောက်လာရောက် မေး မြန်းမှုရှိပါတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့ ဝင်ငွေ တော့ရှိတယ်။ ဓမ္မစေတီ မင်းခေါင်း လောင်း ကို မင်းအစိုးရတွေက ဆယ် ယူရင် အောင်မြင်မယ်။ ဆိုလိုချင်တာ ကတော့ မင်းအစိုးရမဟုတ်ရင်အထိုက် အလျှောက် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ပါ။ မင်းအစိုးရက ဆယ်ယူရင် လည်း အခက် အခဲမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်။
၁၉၈ဝခုနှစ်ကစပြီး ဒီလောကကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗေဒင်မျိုးရိုး ရိုး ရှိပါတယ်။ လက်ရိုးဗေဒင်မှာ ဆရာ ဦးမြင့်ဆွေ၊ သုံးတံပေါ်နိတ်စ်တွင် ဆရာ ဦးကျော်ရှိန်တို့ဟာ ဆရာတွေပါ။ ဒီ အချိန်အထိ ငွေကြေးနှင့် မဟောပါဘူး။ မဟာဘုတ်၊ ဂြိုဟ်အိပ်ဂြိုဟ်စား၊ သုံးတံ ပေါ်နိတ်စ်၊ ကာလကြီး ဋီကာ စတဲ့ အခြေ ခံဗေဒင်များကို မန္တလေးတိုင်း တောင်သာမြို့နယ် ကန်တော်တိုက် ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယ၊ ဆင်ဖြူကျေး ရွာ ဗေဒကဝိဆရာကျော်အေးတို့ဆီမှာ အန္တေဝါသိကအနီးကပ် တပည့်ခံပြီး ငါးနှစ်ကြာ သင်ယူခဲ့ပါ တယ်။ လက်ရှိ မှာ ဗေဒင်ဟောစားခြင်းလည်း မလုပ် ပါဘူး။ ထူးခြားမှုအနေနဲ့ မြင်းဖြူရှင်နတ် အမေမယ်ဝဏ္ဏအာရုံ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အမြဲရှိပါတယ်။ အမေ မယ်ဝဏ္ဏက တော့ သထုံဘုရင် မနုဟာမင်းရဲ့ နှမ တော်ဖြစ်ပြီး လူတွေထင်သလို ဘီလူး မဟုတ်ဘူး။ မတရားကြံသူများတွေ့ ရင် ဘီလူးဖြစ်ပါစေလို့ သစ္စာပြုထားလို့သာ ဘီလူးလို့  မြင်တာပါ။ အဘဘိုးမင်း ခေါင်ကလည်း အကြားဓာတ် အမြင် ဓာတ်ပေးပါတယ်။ ဓမ္မစေတီ ခေါင်း လောင်းဆယ်ယူဖို့ အောင် မြင်မှုရှိမရှိ ကတော့ ဆယ်ယူသူ ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ စရဏ အားကောင်းမှု၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ၊ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ပြည် သူများအတွက် ပူဇော်ခွင့်နဲ့ များစွာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ မဟာဘုတ်နည်း အရပါ ထပ်မံဟောပြော ရရင် ခေါင်း လောင်းဆယ်ယူရာမှာ တနင်္ဂနွေသား သမီးများ ဦးဆောင်ရင် ပိုအဆင်ပြေ နိုင်ပါတယ်။